बेलायतको बर्मिन्ग्हम सहरमा बिशेष भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न ! कसले जित्यो कप ! (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
बेलायतको बर्मिन्ग्हम सहरमा बिशेष भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न ! कसले जित्यो कप ! (भिडियो सहित)
शान्ती नेपाली समाज बेलायतलको आयोजनामा यहि २२ जुलाई २०१९ मा भलिबल कार्यकर्म प्रतियोगिता बेलायतको बर्मिन्ग्हम सहरमा सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रमा लाइ बाजा गाजा सहित शान्ति नेपाली समाज नौमती बाजाले स्वागत गरेको थियो । आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गरी बिशेष गरी बिर्मिङ्हम बासी नेपालीहरुको साथमा उक्त कार्यकम अगाडी बढ्न सफल भएको थियो ।
बेलायतको बिभिन्न सहर बाट जस्तै GRNCA Reading, Syangja , Swindon , Scotnepal club Edinbrough, Nottigham, SNSB भलिबल कल्बले यस प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनु भएको थियो । बिशेष गरि SNSB खेलकुद संयोजक भेसु पुन यस कार्यकर्मलाइ सफल बनाउन निकैनै सक्रिय रुपमा खट्नु भएको थियो । शान्ति नेपाली समाजका अधक्ष्य लिला बहादुर थापाले उपस्थित सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि तथा बिशेष अतिथिहरु लगायत खिलाडीहरु लाई आफ्नो बिशेष मन्तब्य राखी उक्त कार्यक्रमको समापन गर्नु भएको थियो ।
यस एन यस बी भलिबल क्लब बर्मिन्ग्हम लगायत शान्ति नेपाली समाज बेलायतले आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै बिशेष प्रतियोगिता लेउन सफल होस् भन्दै हाम्रो सुभकामना । हेरौ उक्त कार्यकर्ममा बिस्तृत जानकारी सहित केहि भिडियो फुटेज र फोटो फिचर हरु।
सेमी फाइनल फुल भिडियो :